तपाईको आज (सोमबार) को राशिफल, आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाईदा ! « Sansar News -->
तपाईको आज (सोमबार) को राशिफल, आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाईदा !
१३ बैशाख २०७८, सोमबार ०८:०३
पुरुषार्थले समाजमा स्थापित बनाउन सक्छ । रोकिएका काम बन्नाले मनग्गे लाभ हुनेछ । चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ । प्रतिस्पर्धा, विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ । दिउँसोदेखि प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ । नयाँ ज्ञानले अध्ययनमा उत्साह जगाउनेछ । व्यवसायका लागि यात्रा सम्भावना छ । परिवारमा केही असमझदारी बढ्न सक्छ ।
बुद्धिको उपयोगले लक्ष्यमा पुगिनेछ । आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ । अध्ययनमा प्रगतिका साथै ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । दिउँसोदेखि भौतिक साधन जुट्नाले दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ । लगनशीलताले परिस्थितिलाई बदल्न सक्छ । साहसी काम गरेर लाभ उठाउन सकिनेछ । काममा प्रतिस्पर्धाको माहोल बन्ने छ ।
हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्नाले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ । बलजफ्ती गर्दा काम बिग्रन सक्छ । आफ्ना मालमत्ता तथा सम्पत्तिमा अरूले दाबी गर्न सक्छन् । अनावश्यक साइनो गाँस्नेहरूसँग सावधान रहनुहोला । नयाँ कामलाई मध्याह्नपछिको साइत उपयुक्त हुनेछ । अध्ययनमा उचाइको बाटो समाउन सकिनेछ । मिहिनेतले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ ।
दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ भने प्रेम र मित्रताको बन्धनसमेत कसिलो हुनेछ । लगानी गर्दा व्यवसायमा मनग्गे धनलाभ हुनेछ । मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउन सक्छ । मध्याह्नदेखि आफन्तमा असमझदारी बढ्न सक्छ। चिताएका काम समयमा गर्न नसकिएला । आफन्तजनको विश्वास गुम्न सक्छ । छिटो फल प्राप्त गर्ने आकांक्षाले समस्या निम्त्याउनेछ ।
अरूको बारेमा चासो राख्दा स्वयं समस्यामा परिएला। अध्ययन र व्यापारमा सोचेजस्तो प्रगति नहुन सक्छ । आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुने समय छ, सजग रहनुहोला । तापनि, मौका पर्खंदा स्थितिमा सुधार आउनेछ । दिउँसोतिर रोकिएका काम बन्नेछन् भने उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ । केही विवादास्पद काम गनुर्परे पनि दिन रमाइलो रहनेछ ।
प्रयत्न गर्दा बिहानै प्रतिफल हातपार्न सकिनेछ । साथीभाइले पनि राम्रै सहयोग जुटाउनेछन् । पछिसम्म लाभ हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । भौतिक साधन जुट्नाले दिगो योजना प्रारम्भ हुन सक्छ । दिउँसोतिर हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनुपर्ला । आत्तिने बानीले बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ । शुभचिन्तकहरूको राय लिएर अघि बढ्नुहोला ।
समयमा होस नपुग्नाले फजुल खर्च बढ्नेछ । ठूलो प्रयत्नले सामान्य उपलब्धि दिलाउनेछ । खर्च गरेर पनि त्यति फाइदा उठाउन नसकिएला । शुभचिन्तकहरूलाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइएला । तापनि सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदा हुनेछ । दिउँसोतिर पारिवारिक भेटघाटले खुसियाली छाउनेछ । पाहुनाहरूको सत्कार र खानपानमा समय बित्न सक्छ ।
श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल हातलागी हुन समय लाग्नेछ । तापनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ । मध्याह्नपछि आकस्मिक खर्चले अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ । शुभचिन्तकहरू समेत टाढिएलान् । मिहिनेतको प्रतिफल जोगाउन अलि चनाखो रहनुपर्नेछ । अवसरको खोजीमा केही दौडधुप समेत गर्नुपर्ला ।
चिताएको काम छिटै सम्पादन हुनेछ । सहयोगीहरूले हिम्मत दिलाउनेछन्। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ । व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ। दिउँसोदेखि विशेष धनलाभ हुन सक्छ । आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिनेछ । दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । सामाजिक दायित्व बढ्नेछ । व्यापार, भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ ।
अस्वस्थताले काममा समय दिन नसकिएला । अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन् । तापनि समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ । दिउँसोदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ भने दिगो फाइदा हुने जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ । परिश्रमले धेरैको मन जित्न सकिनेछ । तारिफयोग्य काम गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ ।
स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ भने चिताएको नतिजा प्राप्त नहुनाले आर्थिक क्रियाकलापमा बाधा पुग्न सक्छ । गोपनीयता बाहिरिनाले लक्ष्यमा पुग्न अप्ठ्यारो पर्नेछ । तापनि मध्याह्नदेखि केही काम बन्नेछन् । तत्काल उपलब्धि प्राप्त नभए पनि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ । रोकिएको काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोला। पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ ।
प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ । रमाइलो यात्राका बीच अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ । व्यवसायमा आम्दानी बढ्नेछ । दिउँसोदेखि काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ला । स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला । मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन् ।
२०७८ वैशाख १३ गते, सोमवार,(२६ अप्रिल २०२१)
तपाईको आज (आइतबार) को राशिफल भन्छ–आज यी सात राशिकाले पुर्याउनुपर्नेछ विशेष ध्यान !